Job 15 KJV – Hiob 15 ASCB | Biblica
Job 15 KJV – Hiob 15 ASCB
Elifas Mmuaeɛ A Ɛtɔ So Mmienu
1Na Temanni Elifas buaa sɛ,
2“Enti onyansafoɔ de nsɛm a aba biara nni muo bɛyi nʼano
anaasɛ ɔde apueeɛ mframa a emu yɛ hye bɛhyɛ nʼafuru ma?
3Ɔde nsɛm huhuo bɛdi anobaabaeɛ,
aka nsɛm a ɛntu bunu biara anaa?
na wosi Onyankopɔn mu ahotosoɔ ho ɛkwan.
5Wo bɔne kyerɛ wʼano deɛ ɔnka;
na woafa aniteɛ tɛkrɛma.
6Wo ankasa wʼano bu wo kumfɔ, ɛnyɛ me deɛ;
wʼankasa wʼano di adanseɛ tia wo.
7“Wone onipa a wɔwoo wo dii ɛkan?
Wɔwoo wo ansa na wɔrewo nkokoɔ?
8Wotie Onyankopɔn afotuo anaa?
Wo nko ara na wonim nyansa anaa?
9Ɛdeɛn na wonim a, yɛnnim?
Nhunumu bɛn na wowɔ a yɛnnie?
10Deɛ wafu dwono ne akɔkoraa wɔ yɛn afa,
wɔn a wɔanyini sene wʼagya mpo.
ne nsɛm a wɔka no brɛoo kyerɛ wo no sua ma wo anaa?
12Adɛn enti na wʼakoma atwe wo korɔ
adɛn enti na wʼani asɔ ogya,
13na woadane wʼabofuo agu Onyankopɔn so
na woma saa nsɛm yi pue firi wʼano?
14“Ɔdasani ne hwan a ɔbɛtumi ayɛ pɛ,
anaasɛ deɛ ɔbaa awo noɔ bɛn na ɔbɛtumi ayɛ ɔteneneeni?
15Onyankopɔn nni ahotosoɔ wɔ nʼakronkronfoɔ mu.
Ɔsorosoro mpo nnyɛ kronn wɔ nʼani so,
16na nkantom onipa bɔnefoɔ ne omumuyɛfoɔ a
ɔnom awurukasɛm sɛ nsuo.
ma menka deɛ mahunu nkyerɛ wo,
18deɛ anyansafoɔ apae mu aka,
a wɔamfa biribiara a wɔnya firii wɔn agyanom hɔ no ansie
19(wɔn a wɔde asase no maa wɔn
ɛberɛ a ananafoɔ biara nni hɔ):
20Omumuyɛfoɔ kɔ ahohiahia mu ne nkwanna nyinaa.
Na basabasayɛni nso, wɔahyehyɛ ne mfeɛ nyinaa ama no.
21Nnyegyeɛ a ɛyɛ hu hyɛ nʼasom ma;
na sɛ ɛyɛ sɛ nneɛma rekɔ yie ma no a, akorɔmfoɔ to hyɛ ne so.
22Ɔpa aba sɛ ɔbɛdwane afiri esum mu;
wɔabɔ no ato hɔ ama akofena.
23Ɔkyinkyini hwehwɛ aduane;
ɔnim sɛ esum da no abɛn.
24Ɔhaw ne ahoyera yi no hu;
25ɛfiri sɛ ɔtenetene ne nsa kyerɛ Onyankopɔn
na ɔma ne ho so tia Otumfoɔ.
26Wɔde akokyɛm a emu pi na ɛyɛ den
kɔ ne so a wɔnsuro no.
27“Ɛwom sɛ sradeɛ ama wɔn afono atotɔ
na wɔn asene mu ɛnam agu mmɛbɛ deɛ,
28nanso wɔbɛtena nkuro a aguo so
na wɔatena afie a obi nte mu,
afie a ɛrebubu mu.
29Wɔrenkɔ so nyɛ adefoɔ bio, na wɔn ahonya rennyina,
na wɔn agyapadeɛ so bɛte na ayera wɔ asase so.
30Esum bɛduru wɔn;
ogyaframa bɛkusa wɔn mman,
na Onyankopɔn anom ahomeguo bɛsoa wɔn akɔ.
31Ɛnsɛ sɛ wɔde wɔn ho to nneɛma huhuo so de daadaa wɔn ho,
ɛfiri sɛ wɔrennya hwee mfiri mu.
32Ansa na wɔn da bɛduru no, wɔbɛtua wɔn ka a ebi renka,
na wɔn mman renyɛ frɔmfrɔm.
33Wɔbɛyɛ sɛ bobedua a wɔapore so aba a ɛnnyiniiɛ,
te sɛ ngo dua a ne nhyerɛnne repore gu fam.
34Na abɔnefoɔ fekuo a wɔnnim Onyankopɔn no renso aba,
na ogya bɛhye wɔn a wɔdɔ kɛtɛasehyɛ no ntomadan.
35Wɔnyinsɛn ɔhaw na wɔwo amumuyɛ;
ASCB : Hiob 15